नेकपाका दुई अध्यक्षबीच यस्तो बन्यो सहमती, नयाँ मन्त्रीको अन्तिम सूचि तयार ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > नेकपाका दुई अध्यक्षबीच यस्तो बन्यो सहमती, नयाँ मन्त्रीको अन्तिम सूचि तयार !
नेकपाका दुई अध्यक्षबीच यस्तो बन्यो सहमती, नयाँ मन्त्रीको अन्तिम सूचि तयार !
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ बीच सोमबार भेटवार्ता हुँदैछ । प्रधानमन्त्री निवासमा बेलुका हुने भेटवार्तामा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा निर्णायक छलफल हुने बताइएको छ ।
नेकपा सचिवायल बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि सहमति दिएपछि सोमबार नयाँ मन्त्रिमण्डलको खाका तयार गर्न दुई अध्यक्ष भेट्न लागेका हुन्। त्यसअघि दुवैतर्फबाट आन्तरिक गृहकार्य गरिएको छ ।
दुवै अध्यक्षले मन्त्री बन्नेहरुको सूचीलाई अन्तिम रुप दिएपछि एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन घोषणा हुने संभावना छ। पुनर्गठनमा केही नयाँ अनुहार समावेश हुनेछन् भने केही पुरानैलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
सोमबार बिहान नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो निवासमा पूर्वमाओवादीका नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको टिममा पनि नयाँ मन्त्रिपरिषद्को खाकाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।
नयाँ मन्त्रीका लागि घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु साह, पम्फा भुसाल, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङलगायत नेता चर्चामा छन् ।
स्रोतका अनुसार उद्योगमन्त्री मातृका यादवको ठाउँमा हटाएर उनको स्थानमा प्रभु शाहलाई जिम्मेवारी दिने र महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापालाई हटाएर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अन्य मन्त्रीका विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ टीम बनाएर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको नीजि सचिवालय परिवर्तन गरिसकेका छन्। आइतबार बेलुका बसेको पार्टी सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्रिमण्डलको खाका तयार गर्न आफू लागेको र छिटै घोषणा हुने बताएका थिए ।
२०७६ मंसिर ०२ गते प्रकाशित
२०७६ मंशिर २ गते १५:४७ मा प्रकाशित
यस्तो छ सेयर बजारको ताजा स्थिति
कार्यान्वयनमा आउँदै ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड, के-के छ मापदण्डमा ?
नेपाल–जापान ६०औं वषगाँठ : पर्यटनको क्षेत्रमा अनेकौं छुटको बहार !
सेयर बजारमा आज : ८ अंकले सूचक घट्दा हेर्नुहोस् के के भयो ?
लाईफ इन्योरेन्सको बोनस र लाभांश शेयरधनीको डिम्याट खातामा
पैसा तयार गर्नुहोस्, एक अर्ब रुपैयाँको म्युचुअल फण्ड आउँदै
पैसा बैंकमै थन्किएपछि साढे २२ हजारले सेवा पाएनन्